स्मार्टफोन ल्याउदै सलमान खान ! | Screennepal
स्मार्टफोन ल्याउदै सलमान खान !
Mar 10, 2017screennepalbollywood, hot news0
काठमाडौ, २७ फागुन । बलिउड अभिनेता सलमान खान चाँडै ग्याजेट्सको दुनियामा प्रवेश गर्ने भएका छन् ।इकोनोमिक टाइम्सले जनाएअनुसार सलमानले चाँडै नै एउटा नयाँ भेन्चरमा लगानी गर्ने सुर कसेका छन् । उनको त्यो कदम हुनेछ स्मार्टफोन बनाउने ।
आफ्नो स्मार्टफोन उद्योगका लागि सलमानले ठूला व्यापारीहरुसँग डिल गर्ने तयारी गरेका छन् । यसमा सेयरहोल्डर या उनी स्वयम् हुनेछन्, या उनको परिवार । सलमानका एक्जिब्यूटिक्सले बताए अनुसार मोबाइल बजारमा हात हाल्न उनी दुई वर्ष अगाडिदेखि नै इच्छुक थिए ।
बिइङह्यूमनका ब्रान्ड मालिक सलमानले स्मार्टफोनका लागि बिइङस्मार्ट ट्रेडमार्क दर्ता गराइसकेका छन् । उनले चिनीया कम्पनी र प्रारम्भिक फोनको मोडल पनि छनोट गरेका छन् जुन एन्ड्रोइडमा चल्ने छ र भारु २० हजारभन्दा कम मूल्य पर्नेछ ।
समाचारमा जनाइएअनुसार सुरुमा यो फोन अनलाइनमा सेलमार्फत बेचिनेछ । पछि यसका लागि रिटेल चेनसँग साझेदारी हुने छ । बिइङस्मार्ट फोनले चिनीयाँ कम्पनीको फोनलाई कडा टक्कर दिने लक्ष्य सलमानको छ ।
Previous Postनमोबुद्धमा राष्ट्रियता खोज्न पुगेपछि... Next Post जोरपाटीका महिलाले खोजे नारी स्वतन्त्रता